पेटमा जमेको बोसो कसरी घटाउने ? – Pahilo Page
पेटमा जमेको बोसो कसरी घटाउने ?
४ माघ २०७८, मंगलवार ०७:०२ 120 पटक हेरिएको
काठमाडाैं । मोटोपनाबाट त्रसित भएका मानिस आजकल तौल घटाउने प्रयासमा छन् । तर धेरै प्रयास गर्दा पनि फिट हुन सकेका छैनन् । कोभिडका कारण भएको लकडाउनले अधिकांश मानिस मोटो भएका छन् । अहिले हामीले अपनाएको जीवनशैलीले तौल बढ्नु सामान्य हो।
तपाईलाई थाहा छ, निष्क्रियता, रक्सी र फास्ट फुड मोटोपनाको प्रमुख कारण हु्। मोटोपना कम गर्न स्थिरता चाहिन्छ। तर यो काम कतिपयले सोचे जस्तो गाह्रो पनि छैन। यस लेखमा, हामी तपाईलाई केहि टिप्स बताइरहेका छौं जसलाई पालना गरेर तपाई आफैंलाई मोटोपनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ।
पेट भरिने ब्रेकफास्ट
यो कार्य भन्न सजिलो मात्र होइन, गर्न पनि सजिलो छ। हरेक बिहानलामो समयसम्म पेट भरिरहने खाजा खानुहोस्। यो बानीले तपाईलाई बिचमा केही अस्वास्थ्यकर खानबाट जोगाउँछ र चाँडै भोक पनि लाग्दैन। तर तपाईंको बिहानको खाजा भुटेको र प्रशोधित खाना नभइ स्वस्थ हुनुपर्छ।
दैनिक वजन मापन
यदि तपाइँ तौल घटाउने यात्रामा हुनुहुन्छ भने कति घटाउने भनेर पहिला नै लक्ष्य तोक्नुपर्छ। त्यसको लागि दैनिक तौल नापेर लक्ष्यको कति नजिक छ हेर्नुपर्छ। यो बानीले तपाईंलाई आफ्नो आहार घटाउन र व्यायाम बढाउन मद्दत गर्नेछ।
तपाईंको खानामा रहेको क्यालोरी गणना गर्नुहोस्। किनभने क्यालोरी गणना वजन घटाउनेसँग सम्बन्धित छ। क्यालोरी गणनाबाट तपाइँको आहार र कसरतमा गर्नुपर्ने थपघटको मात्रा स्पष्ट हुन्छ।
अधिक फाइबरयुक्त खाना
आलु, उच्च फाइबरयुक्त खानेकुरा, ड्राइ फ्रुट र अण्डा जस्ता खानेकुराले पेट छिटो भर्छ। यसको सेवनले तपाईको बारम्बार भोक लाग्दैन। साथै, आहारमा राम्रो बोसो युक्त खाना जस्तै ड्राइ फ्रुट आदि समावेश गर्नुहोस्। तपाईंको आहारबाट प्रशोधित खाना हटाउनुहोस्।
व्यायामले शरीरमा भएको क्यालोरी धेरै खपत गर्न मद्दत गर्दछ। तौल घटाउने योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष व्याम हो। यदि तपाईले धेरै क्यालोरी खर्च गर्नुभयो भने, तपाईको तौल छिटै नियन्त्रणमा आउन सक्छ। तर तपाईले यसलाई कुशलतापूर्वक जलाउनु पर्छ। निष्क्रिय जीवनशैली मोटोपनाको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। शारीरिक गतिविधि जस्तै नृत्य, दौड, योग, तौल प्रशिक्षण र हिँडाइ पनि प्रभावकारी हुन्छ।
तनावले कोर्टिसोल हर्मन निकाल्छ। कोर्टिसोलले भोक बढाउँछ, जसले तपाईंलाई धेरै खान मन लाग्छ। त्यसैले तनाव कम गर्नुहोस्। पर्याप्त आराम आराम गर्नुहोस्, रमाईलो गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहोस्, गहिरो सास फेर्न अभ्यास गर्नुहोस् वा योग ध्यान गर्नुहोस्।
रातको राम्रो निद्राले एक प्रकारको हर्मोन निस्कन्छ जसले तपाईको भोक नियन्त्रणमा राख्छ। अर्कोतर्फ, निद्राको कमीले शरीरले थकान महसुर गर्छ। यसको पूर्ति खानाको माध्यमबाट ऊर्जा निकालेर गर्छ।
चिनी जताततै छ! हामी यसलाई हाम्रो पेय पदार्थ, डेसर्टमा थप्छौं र यो धेरै प्याकेज गरिएका खानाहरूमा पनि पाइन्छ। चिनीले कुनै पौष्टिक लाभ प्रदान गर्दैन र यसले चिनीको स्तर बढाउँछ, जसले वजन बढाउँछ। तसर्थ, चिनीको खपत सीमित गर्नुहोस् र यसलाई स्वस्थ विकल्पहरूसँग बदल्नुहोस्।
प्रशोधित खाना नखाने
अन्न, रोटी र प्याकेज गरिएको खाजा जस्ता प्रशोधित खाद्य वस्तुहरू हाम्रो दैनिक आहारको हिस्सा बनिसकेको छ। चटपटा स्वाद र त्यसको सहज उपलब्धताले प्रशोधित खान अत्याधिक खाइन्छ। तर यी खानेकुराहरू परिष्कृत हुन्छन्। हानिकारक तत्वहरू हुन्छन् र आवश्यक मात्रामा पोषक तत्वहरूको अभाव हुन्छ। तीमध्ये धेरै उपभोग गर्दा क्यालोरी बढ्छ, जुन तौल बढाउने कारक हो।
डाइट प्लान बनाउनुहोस्
डाइट प्लान बनाउनु स्वस्थ बानी हो। यसले तपाईंलाई फिट राख्छ र तौल समस्याहरूबाट बचाउँछ। आफूले बिहानदेखि बेलुकासम्म खाने खानाको डाइट प्लान बनाउनु होस् र त्यसको अनुसरण गर्नुहोस्।
नोट : मिठाइ, चिनीयुक्त पेय पदार्थ, चर्को नुन, भुटेको खानेकुरा, प्रशोधित पिठो, सेतो रोटी, सफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड र रातो मासु नखानुहोस्। दिनमा कम्तीमा ३ लिटर पानी पिउनुहोस्। करिब एक घण्टा शारीरिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहोस्।